पोल्याण्डमा टिपिंग - जवाफ दिइयो!
घर / आवास, नाई, बारहरू, bartender, द्वारपाल, चालकहरुको, युरोप, निर्देशित भ्रमणहरू, हेयर ड्रायर, होटल, घरेलू, नौकराहरू, मालिश चिकित्सकहरू, पोल्याण्ड, भरियाहरू, क्षेत्र, रेस्टुरेन्ट, सर्भर, सेवा, स्पा, ट्याक्सीहरू, टूर गाईडहरू, टूर गाईडहरू, पर्यटन, यातायात, Uber, वेटर / वेटरिस / पोल्याण्डमा टिपिंग
1 पोल्याण्डमा टिपिंग
2 पोल्याण्डका रेस्टुरेन्टहरूमा टिपिंग
2.1 तपाईं पोल्याण्डमा रेस्टुरेन्टहरू टिप गर्नुहुन्छ?
2.2 पोल्याण्डका रेस्टुरेन्टहरूमा मैले कति सुझाव दिनुपर्दछ?
3 पोल्याण्डमा बारहरूमा टिपिंग
3.1 के तपाईं पोल्याण्डमा बारहरूमा सल्लाह दिनुहुन्छ?
3.2 तपाइँले पोल्याण्डमा बारहरूमा कति सल्लाह दिनुहुन्छ
4 पोल्याण्डको होटेलहरूमा टिपिंग
4.1 के तपाईं पोल्याण्डको होटेलहरूमा टिप्स दिनुहुन्छ?
4.2 पोल्याण्डको होटेलमा तपाईले कति सुझाव दिनुपर्दछ?
5 पोल्याण्डमा टिपिंग टूर गाईडहरू
5.1 तपाईं पोल्याण्ड मा टूर गाइड टिप छ?
5.2 पोल्याण्डमा तपाईले कति यात्रा गर्नुपर्दछ?
6 पोल्याण्डमा टिपिंग ट्याक्सीहरू
6.1 तपाईं पोल्याण्डमा ट्याक्सी ड्राइभरहरूको सल्लाह दिनुहुन्छ
6.2 पोल्याण्डमा तपाईले आफ्नो ट्याक्सी चालकलाई कति टिप दिनुपर्दछ
7 पोपिंगमा उबर टिप्दै
7.1 पहिलो बन्द, पोल्याण्डमा पनि उबर छ?
7.2 के तपाईं पोल्याण्डमा उबर टिप गर्नुहुन्छ?
7.3 पोल्याण्डमा तपाइँले कति उबेर टिप गर्नुपर्छ
7.4 पोल्याण्डमा उबरका विकल्पहरू के हुन्
7.5 के तपाइँ पोल्याण्डमा ट्यासिफाइ, फ्रिनो, Cab4U, iTaxi, वा ट्याक्सी पोल्स्का सल्लाह दिन आवश्यक छ?
8 पोडिंगमा हेयरड्रेसरहरू र नाइयोंहरू टिप्ने
8.1 के तपाईं पोल्याण्डमा आफ्नो कपाल सल्लाह दिनुहुन्छ?
8.2 पोल्याण्डमा तपाईको कपाल कपाल कति टिप गर्नुपर्छ?
8.3 तपाईं पोल्याण्ड मा आफ्नो नाई टिप छ?
8.4 पोल्याण्डमा तपाइँको नाई कत्तिको सल्लाह दिनुपर्दछ?
9 पोल्याण्डमा स्पामा टिपिंग
9.1 तपाईं पोलैंड मा स्पा मा टिप छ?
9.2 तपाइँले पोल्याण्डमा स्पामा कत्ति सल्लाह दिनुपर्दछ
यदि तपाईं पोल्याण्डको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं उडानहरूको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईंको बजेटको लागि उत्तम होटेल वा अन्य आवास खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्, भाँडाको कार लिदै, र सम्भावित पर्यटनहरू हेर्दै। तपाईं यो जान्न चाहानुहुन्छ कि पोल्याण्डमा के गर्नु पर्ने सबैभन्दा लोकप्रिय चीजहरू हुन् र स्थानीय चलनहरू पत्ता लगाउन। एउटा महत्त्वपूर्ण स्थानीय चलन जुन प्रत्येक आगन्तुकले बुझ्नु पर्छ पोल्याण्डमा टिप्सिंग गर्दै छ।
त्यसो भए पोल्याण्डमा टिप्स दिनुहुन्छ? तपाईं केहि अवस्थाहरूमा सल्लाह दिनुहुन्छ, तर अरूलाई होइन। पत्ता लगाउनुहोस् कि यदि तपाईं रेस्टुरेन्ट, होटेल, ट्याक्सीमा, स्पामा, टूरमा, वा कपाल वा नाईमा टिप्स गर्दै हुनुहुन्छ भने।
पोल्याण्डका रेस्टुरेन्टहरूमा टिपिंग
पोल्याण्डका रेस्टुरेन्टहरू तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन्, त्यसैले तपाईं पोल्याण्ड भ्रमण गर्दा आफैँ बाहिर खानपान पाउनुहुनेछ। रेस्टुरेन्टहरू पोलिश भोजन अन्वेषण गर्ने उत्तम तरिका हो वा अधिक परिचित भाडाको साथ छडी। चाहे तपाईं पोलिश रेस्टुरेन्टमा खाँदै हुनुहुन्छ वा छैन, तपाईं आफ्नो बिल तिर्नु अघि तपाईं पोल्याण्डमा रेस्टुरेन्ट टिपिंग शिष्टाचार बुझ्न चाहनुहुन्छ।
तपाईं पोल्याण्डमा रेस्टुरेन्टहरू टिप गर्नुहुन्छ?
पोल्याण्डका रेस्टुरेन्टहरूमा यो सामान्य हो र अपेक्षित हुन्छ जहाँ एक वेटरले तपाईंलाई खाना दिन्छ, विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रका प्रमुख शहरहरूमा। तपाईंले काउन्टर सेवा रेस्टुरेन्टहरूमा टिप्स गर्न आवश्यक पर्दैन।
प्रमुख शहरहरू र पर्यटन क्षेत्रहरूमा 'राम्रो' रेस्टुरेन्टहरूको बाहिर, यो सेट अप प्रतिशतको सट्टामा बिल गोल गर्न अधिक सामान्य छ।
दिमागमा राख्नुहोस् कि केहि रेष्टुरेन्टहरूले तपाईंको बिलमा 'सेवा शुल्क' थप्नेछ, विशेष गरी ठूला समूहहरूका लागि। यदि तपाईं आफ्नो बिलमा सेवा शुल्क थपिएको देख्नुहुन्छ भने, टिप नछोड्नुहोस्। सेवा पहिले नै मेनूमा आईटमको मूल्यमा निर्माण हुनुपर्छ।
पोल्याण्डका रेस्टुरेन्टहरूमा मैले कति सुझाव दिनुपर्दछ?
तपाईंले राम्रो सेवाको लागि कुल बिलको तपाईंको वेटरलाई १०% टिप दिनुपर्दछ। यदि तपाईंको रेस्टुरेन्टले तपाईंको १०% बिलमा 'सेवा शुल्क' थपेको छ, जुन केहि रेस्टुरेन्टहरूमा हुन्छ विशेष गरी ठूला पार्टीहरूसँग, यसमा माथि कुनै सुझाव नछोड्नुहोस्।
यदि तपाई प्रमुख शहरहरु र पर्यटन क्षेत्रहरु बाहिर नियमित रेस्टुराँ मा खादै हुनुहुन्छ भने, तपाईले आफ्नो बिल बनाउन सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईंको बिल PL PL PLN छ भने, तपाईंले आफ्नो वेटर PL० PLN छोड्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंको वेटरलाई नगदमा सुझाव दिनुहोस् किनकि क्रेडिट कार्ड सुझावहरूले तपाईंको वेटरमा नबनाउन सक्छ, तर रेस्टुरेन्ट मालिकले राख्दछ। जब तपाइँ तपाइँको खानाको लागि भुक्तान गर्दै हुनुहुन्छ र एक टिप थप्दै हुनुहुन्छ, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ कति परिवर्तन चाहानुहुन्छ निर्दिष्ट गर्नुभयो। यदि तपाइँ तपाइँको पैसालाई तपाइँको वेटरमा हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ र 'धन्यवाद' (वा पोलिश भाषामा dziękuję) भन्नु भयो भने, तपाइँले वेटरलाई सबै परिवर्तनहरू राख्न भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसोभए यदि तपाइँ परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने, तपाइँको वेटरलाई पक्का गर्नुहोस् कि तपाइँ कति परिवर्तन चाहानुहुन्छ फर्कनुहोस्!
पोल्याण्डमा बारहरूमा टिपिंग
यदि तपाईं पोल्याण्डको बारमा पिउदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले केही स्थानीय बियरहरूको नमूना पाउनुहुनेछ र आफ्ना साथीहरूसँग समय बिताउनुहुनेछ। सायद तपाईले नयाँ साथी पनि बनाउनुहुनेछ। कस्तो बीयर छनौट गर्ने भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुका साथै, तपाईं पोल्याण्डमा तपाईंको बार्टेन्डर टिप्स दिन चाहानुहुन्छ कि भनेर जान्न चाहानुहुन्छ। पढ्नुहोस्
के तपाईं पोल्याण्डमा बारहरूमा सल्लाह दिनुहुन्छ?
तपाईंले पोल्याण्डमा तपाईंको बार्टेन्डर टिप गर्नुपर्दैन। यदि तपाईं टिप छोड्न चाहनुहुन्छ भने, यो टिप ठीक छ यदि तपाईंले पेय आदेश दिनुभयो कि बारटेन्डरलाई केहि समय लिईयो वा यदि बारटेन्डर विशेष गरी मैत्री हो भने।
तपाइँले पोल्याण्डमा बारहरूमा कति सल्लाह दिनुहुन्छ
जब तपाईं पोल्याण्डमा बारहरूमा तपाईंको बार्टेन्डर टिप्स गर्नुपर्दैन, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने। यदि तपाईं टिप छोड्दै हुनुहुन्छ भने, यो अतिरिक्त PLN सल्लाह दिनका लागि उत्तम हो। त्यसैले यदि तपाईंको बियर5PLN थियो भने, बारटेन्डर PL PLN छोड्नुहोस्।
पोल्याण्डको होटेलहरूमा टिपिंग
जब सम्म तपाईं छुट्टी भाँडामा, एक Airbnb मा, वा साथीहरू र परिवारको साथ बस्दै हुनुहुन्छ, तपाईं सम्भवतः होटेलमा बस्नुहुनेछ। तपाईले होटेल छान्नु भए पछि तपाई पुग्नु भन्दा पहिले तपाईले थाँहा पाउनु हुन्छ तपाईले पोल्याण्डमा होटेल स्टाफलाई सल्लाह दिनुहुन्छ कि भनेर। के तपाई घण्टी टिप गर्नुहुन्छ? ढोका कसरी छ? तपाईं होटल नोकर्नी टिप छ वा छैन?
के तपाईं पोल्याण्डको होटेलहरूमा टिप्स दिनुहुन्छ?
पोल्याण्डको होटेलहरूमा तपाईलाई बेलफोप / लगेज पोर्टरको अपवाद बाहेक होटेल स्टाफलाई सल्लाह दिन बाध्य छैन।
जबकि तपाईले अन्य होटेल स्टाफलाई टिप्स गर्नुपर्दैन, तपाईले आफ्नो नौकर नोकर र ढोका टुक्राहरू तपाईको विवेकमा अपवादात्मक सेवाको लागि छोड्न सक्नुहुन्छ।
पोल्याण्डको होटेलमा तपाईले कति सुझाव दिनुपर्दछ?
यदि तपाइँको होटेलको घण्टी / लगेज पोर्टर छ भने, तपाई उसलाई PL PLN टिप दिन सक्नुहुन्छ तपाईको सबै सामान तपाईको कोठामा ल्याउनका लागि। यो पर्याप्त छ र दिमागमा राख्नुहोस् यो PL PLN कुल हो, प्रति झोलामा होईन।
पोल्याण्डमा टिपिंग टूर गाईडहरू
के तपाईं पोल्याण्डको भ्रमणको बेला केहि बेर भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाइँ हुनुहुन्छ भने, तपाइँले जान्न चाहानुहुन्छ कि तपाइँ टुरको अन्त्यमा तपाइँको टुर गाइडलाई टिप दिनुपर्दछ।
तपाईं पोल्याण्ड मा टूर गाइड टिप छ?
यद्यपि तपाईं पोल्याण्डमा तपाईंको भ्रमण मार्गनिर्देशनको लागि सुझाव दिन बाध्य हुनुहुन्न, तिनीहरूलाई टिप छोड्नु यो सामान्य हो। टिप छोड्ने कि नगर्ने निर्णय गर्ने क्रममा, याद गर्नुहोस् कि तपाईंले एक असाधारण टुर गाइडको लागि मात्र टिप छोड्नु पर्छ। एक मध्यम यात्रा के थियो भनेर टिप नछोड्नुहोस्।
माथिको उही सल्लाह टुर चालकहरूको लागि जान्छ। तपाईंले तिनीहरूलाई टिप गर्न आवश्यक पर्दैन, तर यो सामान्य छ।
पोल्याण्डमा तपाईले कति यात्रा गर्नुपर्दछ?
यदि तपाइँ तपाइँको टूर गाईड टिप छोड्न चाहानुहुन्छ, 5% - 10% तपाइँको टूरको लागतको टिपिंग विचार गर्नुहोस्। %% राम्रो यात्राका लागि हुन्छन् जबकि १०% एक असाधारणको लागि हुन्छ। यद्यपि यो त्यति पैसाको रूपमा लाग्दैन, पोल्याण्डको सापेक्ष किफायतीलाई दिएमा, यो भ्रमण मार्गनिर्देशनको लागि राम्रो सुझाव हो। याद गर्नुहोस् कि पोल्याण्डको टिपिंग संस्कृति तपाईं जस्तो आउनु भए जस्तो हुँदैन।
पोल्याण्डमा टिपिंग ट्याक्सीहरू
ट्याक्सीहरू पोल्याण्डको शहर वरिपरि जान सजिलो र सस्तो तरीका हुन सक्छ। यदि तपाईं पोल्याण्डमा ट्याक्सी लिने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले ट्याक्सी चालकलाई टिप छोड्नुहुने छ कि छैन भनेर पनि जान्न चाहानुहुन्छ। यदि तपाइँ तपाइँको ट्याक्सी चालक लाई एक सल्लाह दिनु पर्छ, तपाइँ कति छोड्नु पर्छ?
तपाईं पोल्याण्डमा ट्याक्सी ड्राइभरहरूको सल्लाह दिनुहुन्छ
होईन, पोल्याण्डमा तपाईले ट्याक्सी ड्राइभरलाई टिप दिनुपर्दैन। यद्यपि यो सुविधाको लागि तपाईको सवारीको अन्त्यमा ट्याक्सी भाडा जम्मा गर्नु सामान्य छ। अन्य टिपिंग मार्गनिर्देशनहरूले सुझाव दिन्छ कि तपाईंले ट्याक्सी ड्राइभरहरूलाई ठूलो रकम टिप्न आवश्यक छ तर यो त्यस्तो होइन।
पोल्याण्डमा तपाईले आफ्नो ट्याक्सी चालकलाई कति टिप दिनुपर्दछ
जे होस् तपाईले आफ्नो ट्याक्सी ड्राइभरलाई टिप छोड्नु पर्दैन, तपाई ट्याक्सी चालकलाई सवारीको अन्त्यमा ट्याक्सी भाडा मिलाएर टिप दिन सक्नुहुन्छ। यदि, उदाहरण को लागी, तपाईको ट्याक्सी भाडा २..28.50० PLN थियो भने तपाईले बिल 30० PLN सम्म पुर्‍याउन सक्नुहुनेछ। तपाईंको चालक त्यो टिपसँग खुसी हुनेछ र तपाईले टिप मात्र दिनु पर्छ यदि चालक पेशेवर थियो, सुरक्षित ड्राइभ गर्यो, र तपाईलाई भएको कुनै झोला तपाईलाई मद्दत गर्‍यो।
पोपिंगमा उबर टिप्दै
यदि तपाईं पहिलो पटक पोल्याण्ड आउँदै हुनुहुन्छ र ट्याक्सी चाहिएको छ भने, तर बेईमान ट्याक्सी ड्राइभरको सिकार हुनबाट जोगिन चाहानुहुन्छ, तपाईं पोल्याण्ड भ्रमण गर्दा इ-हेलि app अनुप्रयोग प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ।
पहिलो बन्द, पोल्याण्डमा पनि उबर छ?
हो, पोल्याण्डमा त्यहाँ उबर छ! तपाइँ तपाइँको उबर अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ उबर अर्डर गर्न तपाइँ दोस्रो पटक पोल्याण्डमा जानुहुन्छ, नयाँ अनुप्रयोग स्थापना गर्न आवश्यक पर्दैन।
के तपाईं पोल्याण्डमा उबर टिप गर्नुहुन्छ?
होईन, पोल्याण्डमा तपाइँलाई तपाइँको उबर ड्राइभरको आवश्यक पर्दैन। पोल्याण्डमा पनि ट्याक्सीहरू यस्तै छन्। यदि तपाइँ तपाइँको उबर ड्राइभरलाई जसो भए पनि टिप छोड्न चाहानुहुन्छ, उत्कृष्ट सेवाको लागि नगद टिपको सराहना गरिन्छ।
पोल्याण्डमा तपाइँले कति उबेर टिप गर्नुपर्छ
जबकि तपाइँले तपाइँको उबर ड्राइभरलाई पोल्याण्डमा टिप छोड्नुपर्दैन, तपाइँ अपवाद सेवाको लागि सुझाव छोड्न सक्नुहुन्छ यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने। यस्तो अवस्थामा तपाईले केहि PLN तपाईको विवेकमा छोड्न सक्नुहुन्छ।
पोल्याण्डमा उबरका विकल्पहरू के हुन्
यदि तपाईं उबर प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न वा यदि तपाईं बस्नुभएको क्षेत्रमा अझै उबर छैन भने, त्यहाँ अन्य धेरै ई-हेलि other अनुप्रयोगहरू पोल्याण्डमा उपलब्ध छन्। त्यहाँ करसिफाइ, FREENOW (जुन नि: शुल्क छैन), Cab4U, iTaxi, र ट्याक्सी Polska छ।
के तपाइँ पोल्याण्डमा ट्यासिफाइ, फ्रिनो, Cab4U, iTaxi, वा ट्याक्सी पोल्स्का सल्लाह दिन आवश्यक छ?
होईन, तपाईंले पोल्याण्डमा आफ्नो ट्यासिफाइ, फ्रीन, Cab4U, iTaxi, वा ट्याक्सी Polska ट्याक्सी चालक टिप गर्न आवश्यक छैन। तपाईलाई असाधारण सेवाको लागी तपाईले नगदी पैसा दिन सक्नुहुनेछ यदि तपाईले यो महसुस गर्नुहुन्छ भने, तर त्यो पूर्णतया तपाईको आफ्नै विवेकमा निर्भर छ।
पोडिंगमा हेयरड्रेसरहरू र नाइयोंहरू टिप्ने
यदि तपाईं पोल्याण्डमा हुँदा कपाल कटाउने वा स्टाइल गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो हेयरड्रेसर वा नाईलाई टिप पार्ने कि नदिने भनेर जान्न चाहानुहुन्छ। यदि तपाईंले टिप छोड्नु पर्छ भने, तपाईंले कति दिनु पर्छ?
के तपाईं पोल्याण्डमा आफ्नो कपाल सल्लाह दिनुहुन्छ?
पोल्याण्डमा तपाईलाई आफ्नो कपालको सल्लाह दिनु आवश्यक पर्दैन। यो बिलको अन्त्यमा गोल गर्न केहि सामान्य छ तर यो पूर्ण रूपमा तपाईको विवेकमा छ।
पोल्याण्डमा तपाईको कपाल कपाल कति टिप गर्नुपर्छ?
जे होस् तपाईले आफ्नो कपाललाई टिप छोड्नु पर्दैन, तपाईले कपाल काटेर र स्टाइल प्राप्त गर्नुभएमा तपाई बिलको अन्त्यमा गोल बनाउन सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, यदि कपालले तपाईंलाई। 33.50० PLN चार्ज गर्‍यो भने, तपाईं PL 35 PLN छोड्न सक्नुहुनेछ।
तपाईं पोल्याण्ड मा आफ्नो नाई टिप छ?
होईन, पोल्याण्डमा तपाइँले आफ्नो हजाम सल्लाह दिन आवश्यक पर्दैन। यद्यपि यो बिलको अन्त्यमा गोल गर्न धेरै सामान्य छ जसले प्रभावकारी रूपमा हजामलाई सानो सल्लाह दिन्छ।
पोल्याण्डमा तपाइँको नाई कत्तिको सल्लाह दिनुपर्दछ?
यद्यपि तपाइँले आफ्नो बार्बरलाई पोल्याण्डमा सल्लाह दिन आवश्यक पर्दैन, बिल बिल मिलाउन यो केहि सामान्य छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईंको कपाल कटौती को लागत 19 PLN थियो, तपाईं आफ्नो नाई 20 PLN छोड्न सक्नुहुन्छ।
पोल्याण्डमा स्पामा टिपिंग
पोल्याण्ड यसको स्पा लागि प्रसिद्ध छ। उनीहरूको चिकित्सा सुविधाहरू बाहेक, तिनीहरू एक दिनको लागि भ्रमण गर्न एक उत्तम स्थान हो (वा अधिक) आराम गर्न। यदि तपाइँ पोल्याण्डको भ्रमणको क्रममा स्पामा जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ स्पा स्टाफलाई टिप दिने हो कि होइन भनेर जान्न चाहानुहुन्छ। यदि तपाईंलाई टिप्स लागेको छ भने, तपाईंले कति छोड्नु पर्छ?
तपाईं पोलैंड मा स्पा मा टिप छ?
जबकि तपाईं पोल्याण्ड मा स्पा मा टिप छैन, यो विदेशी पर्यटक बीचमा एक सामान्य सामान्य अभ्यास हो। यदि तपाइँ उपचारको लागि विशेष स्टाफ सदस्यलाई टिप छोड्न चाहानुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् यदि तपाईंले असाधारण सेवा प्राप्त गर्नुभयो भने मात्र त्यसो गर्नुहुन्छ।
यदि तपाईंले उत्कृष्ट सेवा प्राप्त गर्नुभयो भने, पहिले स्पा स्टाफ व्यक्तिलाई सोध्नुहोस् यदि उनीहरूले तपाईंको सुझाव स्वीकार्न सक्छन्। यदि ती गर्न सक्दैनन् भने, फ्रन्ट डेस्कमा प्राय: टिप ईन्फाफा हुन्छ जुन तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाइँले पोल्याण्डमा स्पामा कत्ति सल्लाह दिनुपर्दछ
याद गर्नुहोस् कि तपाईंले पोल्याण्डमा स्पामा टिप्स गर्न आवश्यक पर्दैन। त्योले भन्यो, यो विदेशी पर्यटकहरूको बीचमा सामान्य अभ्यास हो त्यसैले तपाईका केही कर्मचारी प्रदायकहरूले सुझाव प्राप्त गर्ने अनुभव पाउनेछन् र उनीहरूलाई अपेक्षा पनि गर्न सक्दछन्। यदि तपाईं तपाईंको स्पा स्टाफ व्यक्तिलाई असाधारण सेवाको लागि टिप छोड्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो विवेकमा त्यसो गर्न सक्नुहुनेछ। गाईडको रूपमा, टिप%% - उपचारको लागतको १०%, तर थप छैन।
ग्यास्कान्स्कक्राकोटिपिङस्पामा टिपिंगहोटलहरूमा टिपिंगरेस्टुरेन्टहरूमा टिपिंगसुझाववरस आवासनाईबारहरूbartenderद्वारपालचालकहरुकोयुरोपनिर्देशित भ्रमणहरूहेयर ड्रायरहोटलघरेलूनौकराहरूमालिश चिकित्सकहरूपोल्याण्डभरियाहरूक्षेत्ररेस्टुरेन्टसर्भरसेवास्पाट्याक्सीहरूटूर गाईडहरूटूर गाईडहरूपर्यटनयातायातUberवेटर / वेटरिस
$ $ C कपाल काट्नको लागि तपाईं कत्तिको सल्लाह दिनुहुन्छ?
तपाइँ कति Do १ Hair बाल कटाउनेको लागि सल्लाह दिनुहुन्छ